Ban Ki-Moon oo u baaqay madaxda caalamka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xoghayaha Qaramada Midoobey Ban Ki-Moon, oo cashar lagu xasusanayo Dag Hammarskjöld ka jeedinaya aqalka laga maamulo magaalada Stockholm. Dhageystiyaasha waxaa ka mid ahaa Stefan Löfven ra'iisalwasaaraha Sweden iyo dhaxalsugaha boqortoodaya Victoria. sawir: TT
Ban Ki-Moon oo u baaqay madaxda caalamka
La daabacay torsdag 31 mars 2016 kl 12.02
Xogahaya Qaramada Midoobey Ban Ki-Moon oo shalay booqasho ku yimid dalka Sweden, lana kulmey ra’iisalwasaare Stefan Löfven ayaa ka gaabsaday in uu dhaleeceeyo heshiiska qaxooti ee ay EU iyo Turkiga wadogaareen.
Balse baddelkeeda waxuu ugu baaqay hoggaamiyaasha caalamka in ay wado qaataan masuuliyadda ka saraan xaaladda cakiran ee qaxooti ee uu maanta caalamku wajahayo oo ah tii ugu darneyn waxii ka denbeeyey dagaalkii labaad ee aduunka.
Ban Ki-Moon waxuu amaanay dalka Sweden iyo sida waddankan u qaabilo qaxootiga ugu badan marka loo barbardhigo tirada dadka Sweden, balse dhanka kale waxuu carrabka ku adkeeyey sida ay lagamo maarmaanka u tahay in si siman loo qeybsado qaabilaadda qaxootiga.
Laanta qaxootiga aduunka UNHCR oo ah hey’ad hoostagta Qaramada Midoobey ayaa horey u dhaleeceysay heshiiiska qaxooti ee ay wadogaareen EU iyo Turkiga, iyadoo weliba hey’addan joojisey taageeradii ay ka baxin jirtay xeryaha qaxooti ee EU ku leedahay dalka Geriiga, maadaame sida hey’addu sheegtay ay ka horimaaneyso mabaadiida hey’adda in ay caawinaad ka geysato xeryo xiran oo dadka lagu xareeyo.
Sida uu dhigayo heshiiska EU iyo Turkiga qaxootiga ku yimaada doonyaha dalka Geriiga waxaa lagu xareynayaa xeryo. Haddii aysan magangeliyo weydiisan Geriiga ama loo diido magangeliyada markaas waxaa dib loogu masaafurinayaa dalka Turkiga. Halkii qof ee Suuriyaan ah ee dib loo masaafuriyo waxaa baddelkiisa laga soo qaadayaa xeryaha qaxootiga Turkiga qof kale oo Suuiryaan ah oo dib u dejin looga sameynayo EU guddaheeda. Iyadoo haddefku yahay in sidaas dib u dejin loogu sameeyo waddamada EU dad gaaraya 72 000 oo ah Suuiryaan laga soo qaadey dalka Turkiga.
Isha: SvD, DN